आँचलले कसलाई हाल्ने भईन मुद्दा ? प्रमाण सहित प्रहरी कार्यालय टेकु पुगेपछि यस्तो भयो – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/आँचलले कसलाई हाल्ने भईन मुद्दा ? प्रमाण सहित प्रहरी कार्यालय टेकु पुगेपछि यस्तो भयो
काठमाडौं । पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालको प्रहार खेप्ने नायीका हुन् आँचल शर्मा । उनले डाक्टर उदिप श्रेष्ठसंग विवाह गरेपछि उनका बारेमा अनेक प्रशंग जोडेर समाचार बनाइए । कलाकारको ब्यक्तिगत जिवन सर्वसाधारणका लागि रोचक लाग्छन् ।
उनीहरु आफ्नो मनपरेका कलाकारका ब्यक्तिगत जिवनका बारेमा जान्न चाहन्छन् । त्यसैले कलाकारका ब्यक्तिगत जिवनसंग जोडिएका विषय मिडियामा बिक्छन् । त्यसैले कलाकारका हरेक कृयाकलाप समाचार बन्ने गर्छन । तर कहिले काँही आफ्नो भ्युअर बढाउने वहानामा कलाकारलाई अनेक लाच्छना लगाएर पनि समाचार बनाइन्छन् । जसमा कुनै सत्यता हुँदैन । अनुमानका आधारमा बनाइने त्यस्ता समाचारका कारण कलाकार पीडित हुन्छन् ।
पछिल्लो समय नायीका आँचल शर्माको विवाह जिवन र उनको विवाह पूर्वको जिवनका बारेमा अनेक अनुमान गर्दै समाचार बनाइए । उनका श्रीमान उदिपका बारेका पनि अनुमान गरेर अनेकथरी समाचार बने । तर उनीहरु दुवै जनाले त्यस्ता अफवाहको पर्वाह गरेनन् । विवाह पछि केही निकै पेचिला विषयमा भने उनीहरुले प्रतिकृया दिए ।
नायीका आँचलले दर्ता नभएका त्यस्ता केही युट्युव र अनलाईनले आफ्ना वारेमा त्यस्ता अफवाह फैलाएको बताइन् । अर्की नायीका माल्विका शुब्बासंगको लाइभ कुराकानीका क्रममा उनले त्यस्तो बताएकी हुन् । उनी त्यस्ता मिडिया र सामाजिक सञ्जालको विरुद्धमा उजुरी गर्न प्रहरी कार्यालय टेकु पनि पुगेको बताइन् ।
उनले त्यस्ता मिडियाको आफुसंग लिष्ट समेत रहेको उनले बताएकी छन् । तर प्रकृया निकै झण्झटिलो भएका कारण आफुले न्याय नपाएको उनले बताइन् । नायीका आँचलले आफुले त्यस्ता युट्युवरको लिष्ट लिएर टेकुमा गएर निवेदन पनि दिएको बताइन् । उनले त्यसरी जाँदा पनि झण्झटिलो प्रकृयाका कारण न्याय नपाएको बताइन् ।
उनले कलाकार हो, सार्वजनिक ब्यक्ति हो भन्दैमा कसैको ब्यक्तिगत जिवनका बारेमा अनावश्यक कुरा लेख्न नहुने बताइन् । उनले अब त्यस्ता अफवाह फैलाउनेहरुका पछाडी आफु नलाग्ने बताइन् । जो जिम्मेवार ब्यक्ति छ उसले त्यस्ता कुरा नलेख्ने र गैह्र जिम्मेवार ब्यक्तिले अर्काको इज्जत उछाल्ने काम गर्ने गरेका कारण उनीहरुको पछाडी लाग्न छोडेको बताइन् ।
पढाइरहेका बेला हेरक दिन छात्रा बेहोस हुन थालेपछि विद्यालय बन्द गरियो
हस्पिटलको गाडीमा सालनालसहितको शिशु फेला